Miskiin Noqday Milyan Dheer oo Abaalkii Loo Galayna Guday 20 Sanno ka dib, Sheeko Xiiso badan | Filimside.net
Home » Arimaha Bulshada » Miskiin Noqday Milyan Dheer oo Abaalkii Loo Galayna Guday 20 Sanno ka dib, Sheeko Xiiso badan
Miskiin Noqday Milyan Dheer oo Abaalkii Loo Galayna Guday 20 Sanno ka dib, Sheeko Xiiso badan
Ganacsatada Shiinaha kuwooda ugu waaweyn mid kamid ah ayaa waxa uu 1 milyan oo yuan($160 kun), waxaanuu lacagtaa siiyay haweenay abaal u gashay maruu dawarsanayay waddooyinka 20 sanno ka hor.
Sheekadan ayaa bilaabatay 1993, markii Hee Rongfeng oo 17sanno jir ahaa uu ku khasbanaaday inuu tuugsado waddooyinka magaalada Taizhou gobolka Zhejiang ee dalka Shiinaha, si uu qoyskiisa u quudiyo, waxa uu yiri; “aniga iyo labo kamid ah saaxiibaday ayaa aadday Taizhou anagoo shaqo doon ah , laakiin wax shaqo ah ma aanan helin, waxaan ku dambeynay inaan waddooyinka tuugsanno, gaajaa na qabatay, dadkii waddooyinka ayaa wax weydiisannay, illaa ay nooga soo baxdo haweenaydan.”
Haweenaydan ayaa ahady Dai Zyingfn oo iyadu markaa haysatay tukaan yar oo lagu iibiyo baastada waxayna siisay raashin iyo hoy ay seexdaan, waxayna xiriir la sameysay dad iyada macaarif la ahaa si ay shaqo ugu hesho,
xitaa lacagtii ay tareenka ku raacayeen iyadaa kasii bixisay. Laakiin Rongfegng abaalkaa ma illoobin waligii , markii uu taajir noqday , waxa uu go’aan saday inuu raadiyo oo uu u baal ugudo, isagaa ayaa markii dambe lugu hiisa ugu tagay, waxaanuu siiyay lacagtaa aan soo sheegnay isagoo u mahadceliyay waliba, waxaanuu tilmaamay haddii aaney haweenaydaasi abaalka u gali lahayn 21 sanno ka hor inaanuu taajir noqdeen heerka uu joogana aanuu gaareen
Waxaa Aqrisay 551